Toriteny Alahady faha-08 Aprily 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Hifampizarana amintsika ny vokatry ny fitsanganan’i Jesoa Kristy ho velona, jerentsika ny fihetsiky ny mpianatra : ny fihetsik’i Tomà. Jerentsika kely ny tantara nisy satria dia niteraka hafaliana lali-paka tao ampon’ireo Apôstôly ny fitsanganan’I Jesoa ho velona, niara-nisakafo tamin’ny mpianany I Jesoa ny alakamisy hariva dia teo no nisaraka taminy i Jodasy nankany amin’ny mpitondra fivavahana nanotany hoe omenareo ohatrinona aho fa atolotro ho anareo izy ? Dia i Jodasy izany tsy niaraka tamin’i Jesoa intsony vitasakafo hariva, fa ny mpianatra mbola nentin’i Jesoa nivavaka tany an-tendrombohitra, rehefa tongan y fisamborana an’i Jesoa dia tsy nisy teo intsony ny mpianatra na iray aza afatsy i Piera nanaraka teny ho eny niaraka tamin’ny fahalemeny, ary ny fahalemeny dia ny tsy finoany ny fitsanganan-ko velona satria raha fantany fa tsy maintsy hitsangan-ko velona i Jesoa dia tsy nandà an’i Jesoa mihintsy izy.
Eto dia azontsika ampitahaina ny finoan’i Piera sy Abrahama izay tsy nisalasala mihintsy nanao sorona ny zanany, satria fantany fa raha maty Isaaka dia vitan’Andriamanitra eo no eo ihany ny manangana azy ho velona. Dia eto koa i Tomà izay nandà nanao hoe raha tsy atsofoko amin’ny rantsa-tanany ny tanako ary raha tsy atsatoko amin’ny lanivoany ny tanako dia tsy hino aho. Tsy nino i Tomà nefa ny Soratra Masina roan-jato taona mialoha dia efa nilaza fa misy ny fitsanganan-ko velona na I Piera koa aza dia efa nahafantatra an’izany ao amin’ny bokin’I Makabeo, rehefa niady ny miaramila ka maty dia hoy ny boky manao hoe foana ny fivavahanay raha toa ka tsy hitsangan-ko velona ny maty. Dia izay no mahatonga ireo Apôstôly hizarazara satria tsy ampy finoana izy. Rehefa tsy ampy finoana dia na mandà an’I Jesoa na mandà ny filazan’ny mpianatra ho an’I Tomà ary tsy ny Soratra Masina irery no nilaza izany fa I Jesoa mihintsy no efa niteny azy ireo fa afaka hateloana aho dia hitsangan-ko velona. Ka rehefa tena nitsangan-ko velona tokoa I Jesoa vao azony ny Soratra Masina.
Ary ho antsika koa, mety manome tsiny an’ireto mpianatra isika hoe efa I Jesoa Andriamanitra mihintsy no miteny fa hitsanagan-ko velona izy ary tokony hanana fanantenàna fa isika koa dia hitsangan-ko velona nefa mbola izany ihany no atao, fa isika ihany koa mandini-tena hoe efa fantatsika fa hitsangan-ko velona I Jesoa ka eo anatrehan’ny ady izay tsy maintsy ataontsika na ny fahalemena izay misy antsika. Fantatrao fa hitsangan-ko velona ny vatanao na ho faty noho ny fandavanao ny rariny sy ny hitsiny, nefa fantatrao koa fa ny fandavanao io ratsy io dia hanangananan’Andriamanitra anao. I Md Paoly efa niteny mazava mihintsy nanao hoe tsy fantatrareo ve fa inty vatanareo inty no hatsangan’Andriamanitra ho velona? Dia izany no fanantenana ho antsika rehetra, ary raha tena ao anatintsika izay finoana izay dia sahintsika ny mandà ny ratsy satria rehefa tsy mandà ny ratsy ianao ka tsy manantena dia ho faty mandrakizay, fa raha mandà ny ratsy ianao ka manantena fa ho velona miaraka amin’I Kristy dia sahinao ny mandà ny ratsy sy ireo fakam-panahy izay sedra eo amin’ny fiainanao. Ialantsika amin’ny kolikoly fa hiankina tanteraka amin’Andriamanitra isika tahaka ny nataon’I Piera nandà fa hanana finoana lehibe tahaka an’I Abrahama.
Henontsika tsara ny tantara fa nirindrina be ny varavarana satria natahotra ny mpianatra, tsy tao anaty fiombonana intsony I Tomà satria kivy, toy izany no mety mahazo antsika eo amin’ny fiainana, tafintohina, kivy, diso fanantenàna na ato am-piangonana na nisy zavatra nangatahana tamin’Andriamanitra dia kivy hoe mbloa tsy nivaly ihany dia kivy ka lasa nivoaka ny fiangonana. Tadidio I Tomà na ireo mpianatra roalahy nitsoaka fa tsy izany no sitrak’Andriamanitra, fa ny hifikiranao tanteraka aminy mandrakariva. Jerentsika kely I Tomà izay mpianatra anisan’ny nantsoin’I Jesoa, anisan’ireo akaikin’ny fony sy nomeny andraikitra sy nahatokisany. Izy dia nahafantatra ny Soratra Masina fa hisy ny fitsanganan-ko velona sy nahafantatra fa hitsangana I Jesoa afaka hateloana. Nijoro vavolombelona teo anatrehan’I Toma ny Fiangonana nisoloan’ireo mpianatra tena nilaza hoe efa hitanay ny Tompo fa tsy nino izy. Niala nenina ny Fiangonana sy ny Soratra Masina ary I Jesoa fa mbola tsy nino ihany izy.
Dia toy izany koa isika eo amin’ny fiainantsika miala nenina ny rehetra mampita ny finoana amin’ny fitsanganana ho velona dia izay no tokony hananantsika toe-po sy toe-panahy tsy sanatria tahaka an’I Tomà fa manaiky mino. Isika tsy mahita fa sambatra isika satria mino an’I Kristy. Eo ny fiekem-pinoana nataon’I Tomà manao hoe Tompoko sy Andriamanitro, famintinana an’ilay Izaho mino ataontsika io, tsotra sady fohy io milaza fa izaho dia tsy manana afa-tsy ianao, ianao no hiankinako satria ianao no mahefa ny zavatra rehetra. Rehefa mandohalika amin’ny Tabernakla sy miondrika amin’ny hazofijalian’I Jesoa Kristy isika dia io no teny haverintsika mangina any am-po any manao hoe Tompoko sy Andriamanitro. Tokony hanana izay tenin’I Tomà izay isika eo anatrehan’ny sedra sy olana sy ny fiainantsika andavan’andro.
Amin’ny maha Kristianina antsika dia misy fivavahana maro be eto ambonin’ny tany fa ho antsika Kristianina Katolika dia mazava ny fampianaran’ny Fiangonana ary amin’ilay Zaho mino amin’ny farany dia misy ilay hoe Izaho mino ny fitsanganana ho velona sy ny fiainana mandrakizay. Ny finoantsika dia fitsanganan-ko velona, ary raha mino izany isika dia tsy avelantsika haloto sy ho viravirain’ny fahotana ny vatantsika.